Mareykanka ma wuxuu doonayaa inuu Turkiga cunaqabateyn saaro? - Idman news
Mareykanka ma wuxuu doonayaa inuu Turkiga cunaqabateyn saaro?
Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu xaqiijiyay in Mareykanka uu ka xunyahay go’aanka Turkiga ee ah inuu Hagia Sophia u badalo Masjid, laakiin wuxuu diiday inuu caddeeyo in dalkiisu uu ka fiirsanayo inuu cunaqabateyn kusoo rogo Turkiga tallaabadaan darteed.
Pompeo ayaa wuxuu shir-jaraa’id oo uu qabtay maanta ku sheegay isaga oo ka jawaabaya su’aal ku saabsan in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka fiirsanayo inuu cunaqabateyn kusoo rogo Turkiga Hagia Sophia darteed ayaa yiri “Niyad jab xoogan ayaan ka dareemeynaa arinka, waana ka xun nahay go’aanka ay qaadatay dowladda Turkiga.”
Si kastaba ha ahaatee Pomeo wuxuu diiday inuu caddeeyo suurtagalnimada cunaqabateyn lagu saari karo Turkiga isagoo yiri: “Waxba kuma dari karo arinkaan.”
Jimcihii la soo dhaafay, Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu saxeexay sharci Hagia Sophia loogu badalaayo masaajid ayadoona arinkaas la hirgalin doono 24-ta Luulyo. Go’aankan ayaa la kulmay dhalleeceyn caalami ayadoo ay kahor yimaadeen dalal dhowr ah iyo ururo ay ka mid yihiin Griiga, Midowga Yurub, Mareykanka, UNESCO, iyo qaar ka mid ah wadamada carabta, gaar ahaan Imaaraadka iyo Masar.
Previous Mogadishu Journal » Itoobiya waxay bilaabaysaa inay biyo-xidheenka Grand Renaissance Blue Nile
Next Mogadishu Journal » Ethiopia begins filling Grand Renaissance dam on Blue Nile
Kheyre oo weerar culus ku qaaday Farmaajo
Africa's week in pictures: 10-16 September 2021 September 16, 2021
‘Real risk’ for banks that Democrats use new reporting rule to fund SALT relief, analyst says September 16, 2021